CompanyHub CRM Integration - 1000 + Applications | Andramo izao!
Miaraka amin'ny CompanyHub dia mahazo fampidirana tsy misy fangarony amin'ny fampiharana malaza rehetra
Zapier dia manome fahafaham-po anao hampiditra ny kaontinao CompanyHub amin'ny fampiharana an'arivony hampitomboanao ny famokarana. Azonao atao ny mampiditra apps toy ny MailChimp, Quick Book, Slack ary maro kokoa ny manamboatra ny asa rehetra manasokajy ao amin'ny workflow.
Andramo izao izao
Miaraka amin'i PieSync dia afaka mampifandray ny app-ny cloud miaraka amin'ny synchronous 2-fomba fiasa. PieSync dia hanampy anao hizara ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa eo amin'ny Marketing Automation, ny Email Marketing, ny Invoicing ary ny fampiharana E-Commerce.
Ho an'ny rafitra CRM rehetra hanomezana seha-pahaizana marina momba ny mpanjifa 360 sy maxium ROI, dia ilaina ny manome ny fampidirana tsy misy farany amin'ny fampiharana rehetra momba ny orinasa. CompanyHub REST API dia hanampy anao hanao izany. Miaraka amin'ny CompanyHub API dia mampiditra ny fampiharana rehetra momba ny orinasa ary mahazo ny hevitra rehetra ilainao.
CompanyHub dia manome anao fehezanteny kely. Ampiasao ity code ity hamoronana endritsoratra ao amin'ny tranokalanao, ary mipetraha fotsiny ary miala sasatra. Raha vantany vao mitsidika ny tranonkalanao ny mpitsidinao manaraka ary manolotra ny endrika, ny mpitsidika dia hovoahary ho toy ny fitarihana vaovao ao amin'ny kaontinao CompanyHub, ny orinasa CompanyHub Web ho an'ny fitarihana dia mamorona ny fomba haingana indrindra sy mahomby indrindra hampiova ny mpitsidika rehetra amin'ny mpanjifa mety aminao .
CompanyHub dia miasa miaraka amin'ny ...
Gmail & kalandrie Google